Imiphumela yocwaningo lwabo nenhlolovo yabo yochwepheshe kuholele ezigabeni ezinkulu ezi-5 ezihamba ngezinto ezibaluleke kakhulu zenkampani ye-ecommerce yokushayela ulwazi, igunya nokuguqula. Ngingeze ezinye izintandokazi zami ezaphuthelwa yimiphumela yocwaningo.
Kukhona kusitoki - Akukho lutho olukhungathekisa njengokudlula lapho uya ekuphumeni ngaphambi kokuthola ukuthi umkhiqizo awusekho. Gcina isayithi lakho kanye nemiphumela yosesho ivuselelwe ngesimo sesitoko usebenzisa amazwibela acebile.
Izivakashi zivame ukusesha imininingwane ebonakalayo kumikhiqizo ngoba azikho ukuzihlola mathupha. Ukuba nokukhethwa okuhle kwezithombe zokucaca okuphezulu kuzoshayela ukuthenga okwengeziwe.